Mourinho oo dhaleeceeyay Ronaldo: Ma jecla gudashada waajibaadka difaaca” – Gool FM
Mourinho oo dhaleeceeyay Ronaldo: Ma jecla gudashada waajibaadka difaaca”
Liibaan Fantastic July 23, 2016
(Madrid) 23 Luulyo 2016 Tababarihii hore ee Real Madrid Jose Mourinho ayaa dhaleeceeyay laacibka ay isku dalka yihiin ee Cristiano Ronaldo.
Mourinho oo ka hadlay sababtii tababaraha xulka Portugal uu Ronaldo u ciyaarsiiyay weerarka ayaa sheegay in xiddiga reer Portugal uusan ka helin gudashada waajibaadka difaaca marka la weerarayo kooxdiisa.
“Fernando Santos (Tababaraha xulka Portugal) wuxuu go’aansaday inuu ku ciyaaro laba Line oo ka kooban 4 laacib, wuxuuna Ronaldo ka ciyaarsiiyay boos ka ag dhaw weerarka si uu uga fogeeyo waajibaadka difaaca oo intabadan uusan ka helin” ayuu yiri Mourinho.
Mourinho ayaa xili hore ka saaray Ronaldo 3-da laacib ee ugu fiican taariikhda kubadda cagta isaga oo magacaabay Maradona, Pele iyo Messi.
Real Madrid oo iska diiday dalab qaali ah oo lagu doonayay James Rodriguez
Faah-faahinta kulankii ay Puntland ugu soo baxday Finalka tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya +SAWIRRO